ကျွန်မဖတ်ဖို့ (၁၈) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ကျွန်မဖတ်ဖို့ (၁၈)
Posted by Yin Nyine Nway on Sep 24, 2010 in Short Story |4comments
(၆) ကိုယ့်ကိုယ် “သေးသေးလေး”(နှိမ့်ချ)လို့ လက်ခံပြီး မျက်စိထဲမှာတော့ “လောက အကြီးကြီး”ကို ထည့်သွင်းထားပါ။
(၇) လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင် သူ့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေး၊ သွားခွင့်ပေးပါ။ တကယ်လို့ သင့်ကိုသူတကယ်ချစ်ရင် သင့်ဆီသူပြန်လာလိမ့်မယ်။
(၈) ကိုယ့်ကိုယ်ကာကွယ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ ဆင်ခြေမရှာပါနဲ့။ အမှားနောက်ကဆင်ခြေတွေကို ဘယ်သူမှ နားမထောင်ချင်ကြဘူး။
(၁၄) တခြားလူပြောတဲ့စကားကို ဦးနှောက်ထဲမှတ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ စိတ်ထဲမှာမှတ်ပါ။
(၁၈) “ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့စကားကို ဘယ်အချိန်မှာပြောပြော၊ ဘယ်နေရာမှာပြောပြော ပြောပြီဆိုရင် တကယ့်စိတ်ရင်းနဲ့ပြောပါ။ “ဆောရီး”ဆိုတဲ့စကားကို ဘယ်အချိန်မှာပြောပြော၊ ဘယ်နေရာမှာပြောပြော ပြောပြီဆိုရင် တစ်ဘက်လူရဲ့မျက်လုံးကို ကြည့်ပြီးပြောပါ။
(၂၁) ကိုယ့်ပစ္စည်းမဟုတ်ရင် မယူပါနဲ့။ ဘယ်လောက်ပဲနှစ်သက် နှစ်သက် လက်လွတ်တတ်ဖို့ နားလည်ပါ။
(၂၂) ကံကြမ္မာက ကိုယ့်အပေါ် အကြွေးတင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ကြိုးစားမှု မလုံလောက်သေးတာ။
(၂၃) ကြိုးစားပါ။ နည်းနည်းထပ်ကြိုးစားပါ… ထပ်ထပ်ပြီးကြိုးစားပါ။ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ပေါ်လိမ့်မယ်။
(၂၅) လူသုံးယောက်ရှိရင် တစ်ယောက်က ကိုယ့်ထက်တော်သူဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ထက်ညံ့သူ မရှိဘူး။ “ငါ ကြိုးစားကြည့်ပြီးပြီးလား” လို့ ကိုယ့်ကိုယ်မေးကြည့်ပါ။
ဒီအချက်တွေကို လုပ်နိုင်ရင် သင် ရင့်ကျက်ပြီတဲ့….
တကယ်ဆို ကျွန်မ မရင့်ကျက်သေးဘူး။ ဒီပို့စ်ကို ရေးနေတုန်း ဂျီတော့ကိုဖွင့်ထားမိတယ်။ အဲဒီမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက် လာနှုတ်ဆက်တယ်။ ကျွန်မပြန်နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ဒါကို သူက မမြင်ဘဲ.. ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်..ကိုယ့်ကိုယ်သိပ်အထင်မကြီးနဲ့.. မချက်ရလို့ လဲသေတဲ့အထဲ ငါမပါဘူးတို့ ပြောသွားတယ်။ ကျွန်မ တကယ်စိတ်မကောင်းဘူး.. လဲသေရင်လည်း မတန်ပါဘူးလို့ ပြန်ပြောမိတယ်။ တကယ်ဆို စာရေးနေရင်း ကျွန်မ ဂျီတော့ဖွင့်မထားသင့်ဘူး။ ဂျီတော့ထဲ ကျွန်မဝင်ခဲပါတယ်။ ဝင်တိုင်း လာပြောတဲ့လူကို တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ပြောပါတယ်။ ပြန်ဖြေတာ နောက်ကျတာနဲ့ စောတာပဲကွာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ…. “ကျွန်မဖတ်ဖို့”တွေ ရှာဖွေပြီး ဘာသာပြန်ရေးမိပြန်တယ်။
(၃) သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်က သင်အဆင်ပြေချိန် သူပျော်မယ်။ သင်အဆင်မပြေချိန် သင်နဲ့အတူ သူပူပန်မယ်။ ဒါကို သေချာမှတ်ထားပါ။ . . . ဒီလိုမျိုး သူငယ်ချင်းတွေသိပ်ရှားသွားပြီနော် . . . သာပေါင်း ညာစားတွေပေါတယ် . . .
နိုင်းနိုင်း စနေ ရဲ့ ဘလော့က စာတွေပါခင်ဗျာ။ မူရင်း ရေးသားသူရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှုကိ်ု အသိအမှတ် ပြုသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။